Snapdragon Wear 2500: Processeur ho an'ny smartwatch ho an'ny ankizy | Androidsis
Eder Ferreño | | SmartWatch
Qualcomm dia manana andro be atao. Satria ankoatry ny fampisehoana ireo mpikirakira vaovao azy dia mamela antsika hanana vokatra vaovao ny orinasa. Ity no sehatra vaovao Snapdragon Wear 2500 izay tadiavin'ny orinasa hampiroborobo ny smartwatches ho an'ny ankizy. Adventure vaovao eo amin'ny sehatry ny orinasa, izay iarahan'izy ireo manitatra ity sehatry ny tsena ity.
Manolotra mpandrindra vaovao amin'ny smartwatch izy ireo. Na dia miaraka amin'ireo Snapdragon Wear 2500 ireo aza ny orinasa dia manantena izany fanatsarana ny ampahan'ny smartwatch ho an'ny ankizy. Hatramin'izao, ireo modely misy dia matetika tsotra be. Amin'ireto processeur ireto dia azonao atao ny manantena maodely tsara kokoa miaraka amin'ny hery lehibe kokoa.
Drafitra vaovao no andrasana amin'ireo famantaranandron'ireto ankizy ireto, ankoatra ny fampidirana asa vaovao ao aminy. Ary koa ny fahatongavan'ny fifandraisana 4G LTE amin'izy ireo, izay hamela anao hifandray na aiza na aiza. Raha fintinina, fandrosoana lehibe.
Amin'izao fotoana izao dia misy fitaovana mihoatra ny folo ho an'ny ankizy mampiasa Snapdragon Wear 2100. Tarehimarika iray izay tsy ratsy, fa i Qualcomm dia te-handroso lavitra kokoa. Izany no mahatonga azy ireo mamorona Snapdragon Wear 2500, miaraka amin'ny tsara indrindra miaraka aminy. Afaka mahita fitomboan'ny batterie isika, manodidina ny 14%. Ho fanampin'izay, antenaina ihany koa fa hisy ny fanatsarana ny hafainganan'ny Bluetooth.
Lafiny iray lehibe ho an'ny ray aman-dreny ny toerana misy ny ankizy. Snapdragon Wear 2500 dia mampanantena fa hitondra fanatsarana an'ity tranonkala ity. Satria handeha izy io ampitomboy ny fiasa izay iasan'ireto rafitra ireto. Ka hanome vaovao marina kokoa amin'ny fotoana tena izy ireo. Ho avy izany Android ho an'ny ankizy. Izy io dia fiovan'ny Android Oreo izay tsy mandany firy ary mikendry ireo kely.
Ho anisan'ireo fitaovana ireo koa ny fandoavam-bola amin'ny fahasalamana sy ny NFC. Na dia amin'izao fotoana izao aza dia toa hiandry ny 2019 isika vao hihaona amin'izy ireo. Satria io fampandrosoana io dia tsy hanomboka raha tsy amin'ny telovolana fahatelo amin'ity taona ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Snapdragon Wear 2500: Miloka amin'ny smartwatches ho an'ny ankizy ny Qualcomm
Ny Meizu X8 dia ho tsara kokoa noho ny Xiaomi Mi 8 SE, raha ny filazan'ny CEO Jack Wong